डायस्पोराका ९९.९९ प्रतिशत नेपालीले आयोजक समितिको निर्णयलाई अनुमोदन गरेका छन्– लुईसाङ डब्ल्यु. तामाङ - New York Samachar
कन्भेनर, नेपाल डे परेड–२०१६
दोश्रो नेपाल डे परेडको आयोजनाको विषयमा केही विवादहरु सुनिएका छन्, त्यसको वास्तविकता के हो ?
मलाई लाग्दैन यो दोश्रो नेपाल डे परेडको सवालमा कुनै विवाद छ भन्ने । डायस्पोराका हरेक नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व यस परेडमा रहेको छ जुन हाम्रोलागि गौरवको कुरा हो । पहिलो परेडमा छुट्नु भएका साथीहरु समेत यस पटक अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्दै हुनहुन्छ । त्यसैले अब हामी बीच कुनै विवाद छैन ।
ऐतिहासिक नेपाल डे परेड तपाईको नेतृत्वमा प्रारम्भ भयो अब यसको निरन्तरताको जिम्मा कसको ?
मलाई खुशी लागेको छ की यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नेपाली डायस्पोराले मेरो नेतृत्वमा प्रारम्भ गरेको छ तर यसको सफलताको भागीदार हामी सम्पूर्ण नेपालीहरु नै हौं । म त केवल एउटा प्रतिनिधि पात्र हुँ । डायस्पोराले मलाई त्यसको लागि योग्य ठानेर नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी सुम्पियो त्यो मेरोलागि चुनौतिपूर्ण सौभाग्य थियो । अब उप्रान्त यो परेड हरेक साल आलोपालो गरेर डायस्पोराले विश्वास गरेको योग्य र कर्मठ व्यक्तित्वको नेतृत्वमा निरन्तर सम्पन्न हुनेछ ।
पहिलो नेपाल डे परेडको आयोजक समितिमा रहेका व्यक्तिहरुले हामीबाट कुनै सुझाव सल्लाह लिएन भन्नु सत्य हो ?
हेर्नुस् गोकुलजी, सल्लाह र सुझाव हरेक नेपालीहरुले यो परेडको वर्तमान आयोजक समितिलाई दिनु पर्छ किन की यो हामी नेपालीहरुको पहिचान र गरिमासँग जोडिएको कुरा हो । अघिल्लो समितिका साथीहरुले पनि आवश्यक सल्लाह दिनु पर्छ । तर घरमा बसेर मसंग सल्लाह लिएन भनेर अहम पालेर कसैले बस्नु हुन्न । यदी यो परेडको गरिमा बढाउने खालको सुझाव र सल्लाह छ भने जो कोहिले आयोजक समितिलाई स्वस्फूर्त सल्लाह दिन सकिन्छ । कुनै पनि आयोजक समिति हरेकको घर आँगनमा सल्लाह लिन जान सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
दोश्रो नेपाल डे परेड पहिलोको निरन्तरता हो या अरु केही थप हुदैछ ?
दोश्रो भन्ने बित्तिकै पहिलोको निरन्तरता नै हो भनेर बुझिन्छ । त्यसैले दोश्रो नेपाल डे परेड पहिलो परेडकै निरन्तरता हो । यसमा कुनै शंका नगर्नु होला । जहाँसम्म थप कार्यक्रमको प्रसंग छ मलाई लाग्छ पहिलो परेड भन्दा पक्कै पनि यस पटक सुदृढ र व्यवस्थित परेड हुदैंछ । यसबारे दोश्रो नेपाल डे परेडका कन्भेनर मंगलदास श्रेष्ठजीलाई नै सोध्नु उपयुक्त होला ।
यो परेडमा नेपालका राजनीतिक दलका भातृसंगठनहरुलाई आयोजक समितिमा नराख्नुको कारण के होला ?
तपाईको यो प्रश्नको जवाफ मैले भन्दा पनि मंगलदास श्रेष्ठजीले सही ढंगले दिन सक्नु होला । जहाँसम्म आयोजक समितिको पत्रकार भेटघाटको कार्यक्रममा प्रस्तुत भए अनुसार राजनीतिक दलका भातृसंगठनहरुलाई आयोजक समितिले परेडमा विशेष अतिथिको रुपमा निम्ताएका छौं भन्नु भएको छ । मलाई लाग्छ त्यो सान्दर्भिक छ र उच्च मूल्यांकन सहितको विश्लेषण हो । नेपाली डायस्पोरालाई दलीय राजनीतिबाट स्वच्छ र सुदृढ राख्ने योजना अनुसार उहाँहरुलाई सम्मानित स्थान दिदै परेड सम्पन्न गर्ने यस पटकको आयोजक समितिका साथीहरुले निर्णय गर्नु भएछ । यो निर्णय पक्कै पनि उच्च विश्लेषण सहित आएको हुनुपर्छ । डायस्पोराका ९९.९९ प्रतिशत नेपालीले आयोजकको यो निर्णय अनुमोदन गरेको देखिन्छ ।
गत वर्षको कन्भेनर भएको नाताले यस्तो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न कति सहज र कति असहज छ ?
हेर्नुस् नेपाल डे परेड जस्तो बृहत्तर र गौरवशाली कार्यक्रम गर्न भने जस्तो सहज त पक्कै छैन । त्यो पनि यो प्रवासमा जहाँ हामी अत्यन्तै व्यस्त हुन्छौ । तर काम गर्छु भनेर नेतृत्व सम्हालेपछि अप्ठ्यारो भयो या सहयोग पुगेन भनेर गुनासो गर्न त मिल्दैन नि ? सोचे जस्तो सहज नभए पनि साहै्र असहज पनि पक्कै छैन । नेतृत्वमा बस्ने साथीहरुले कम्तिमा पनि डेढ महिना जति आफ्नो नियमित समय यसैमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र भने परेड असम्भब पनि हुन सक्छ । गजबको कुरा त गत साल मैले, मंगलदास श्रेष्ठजी र रवि किरण कोईरालाजीले लगभग ३ महिना पहिलो परेडको लागि समय खर्चेका थियौं । शायद पहिलो पटक भएकोले होला । अरु साथीहरुले पनि साथ दिनु भयो ।